अष्ट्रेलियाबाट डा. केसीको आन्दोलनमा समर्थन - प्रवास - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २९, २०७४-नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको बिकृती र बिसंगीतको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै बिगत २१ दिनदेखि अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागप्रति समर्थन गर्दै सिड्नीमा आज मौन प्रदर्शन गरिएको छ । उनको समर्थनमा यहाँका अन्य राज्यहरु र न्युजिल्याण्डमा समेत कार्यक्रमको आयोजना हुदैछ ।
बाढीले सयौं थुनिए, उद्धारको लागि गुहार ›